Maxkamada ICJ oo dhageysiga muranka kiiska badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya dib u dhigtay 2021 - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMaxkamada ICJ oo dhageysiga muranka kiiska badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya dib u dhigtay 2021
Maxkamada ICJ oo dhageysiga muranka kiiska badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya dib u dhigtay 2021
May 20, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweynaha ICJ Cabdulqawi Axmed Yuusuf. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dhageysiga Maxkamada ICJ ee muranka kiiska badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa dib loogu dhigay 15-ka Maarso, 2021, sababo la xiriirta dhibbaatada xanuunka coronavirus uu ku yeeshay adduunka.
Raysulwasaare ku xigeenka Dowladda Federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa sheegay in shalay ay maxkamada ICJ u soo dirtay waraaq labada dal taasoo ay ku sheegayso in kiiska dacwada dib loo dhigay.
Waxa uu sheegay in Dowladda Soomaaliya ay marwalba dooneysay in dacwada wakhtiga loo asteeyay lagu qabto, balse ay hadda aqbalayso dib u dhigida ICJ maxaa yeelay coronavirus dartiis.
Tani waa markii saddexaad oo dhageysiga muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya dib loo dhigo.
Labada dal ee dariska ah waxay sheeganayaan lahaanshaha 150,000 kiilomitir oo labo jibaar ah oo kuyaala xeebta Badweynta Hindiya, halkaas oo la sheegay in ay qani ku tahay saliid, gaas iyo kaluunka tuna.
Kooxo looga shaki qabo burcadbadeed Soomaali ah oo weerar ku qaaday markab shidaal
Wasaaradda Cadaalada iyo Diinta & Awqaafta Puntland oo joojisay Jamaacada Salaada Ciida
Hoggaamiyaha mudada dheer ee Gambia Yahya Jammeh oo aqbalay in uu xilka ka dego
Banjul-(Puntland Mirror) Hoggaamiyaha mudada dheer ee Gambia Yahya Jammeh ayaa sheegay in uu xilka ka degayo kadib markii uu diiday in uu aqbalo natiijadii doorashada. Bayaan uu ka sii daayay taleefishinka dowladda, ayuu ku sheegay [...]
Ugu yaraan labo qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan labo qof ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho maanta oo Sabti ah. Qaraxa oo ahaa miino dhulka lagu aasay ayaa ka dhacay xaafada Xoosh, waxaana lala eegtay guddoomiye [...]
Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo shacabka Gaalkacyo kala qaybgalay salaada Ciida Adxaha oo lagu oogay garoonka kubada cagta ee Cawaale
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Madaxweyne ku xigeenka dowlada Puntland Cabdixakiin Cumar Camay iyo xubno ka tirsan golayaasha dowlada ayaa saakay oo Isniin ah shacabka magaalada Gaalkacyo kala qaybgalay salaada Ciida Adxaha oo lagu oogay garoonka kubada cagta [...]